Zvinhu zvakasarudzika zveWheelchair yemagetsi
Nekugadzirwa kwewiricheya yemagetsi, vanhu vakabatsirwa zvikuru. Dzimwe nguva dzinonzi magetsi macheya, aya mawiricheya ave kubatsira kukuru kune vanorwara uye remara ndiani angadai asina kusimba neimwe nzira.
Mhando dzakasiyana dzeMagetsi Wiricheya
Mawiricheya emagetsi anowira mumakirasi matatu ekutanga:
Pamberi Wheel Inotungamirwa: Kazhinji shandisa mukati memba nekuda kwekugona kwavo uye ivo havana simba senge kumashure magaro ekutyaira.
Kumashure Wheel Powered: Iyi ndiyo inonyanya kufarirwa mhando yechigaro chemagetsi uye ivo zvakare vane simba zvakanyanya, izvo zvinoita kuti ive yakanaka kune zvekunze zvinangwa. Zvakadaro haina manyawi sewiricheya yevhiri remberi uye ine redhiyo yakakura inotenderera.
Mid Wheel Powered: Aya mawiricheya emagetsi haana kukodzera panzvimbo isina kuenzana. Ivo zvakare vane yakakura kutendeuka nharaunda uye haina kudzikama kwazvo.
Mabhandi kana magiya anoshandiswa kufambisa mawiricheya emagetsi. Belt rinotyairwa mawiricheya emagetsi anoda kugara achigadziriswa asi ari nyore uye akanyarara kwazvo. Zvigaro zvemagetsi zvinofambiswa nemagetsi zvinoda kuchengetedzwa kushoma asi zvinopera nekukurumidza uye semhedzisiro zvine ruzha kana zvichifamba.
Macheya Emagetsi Anobatsira Kune Voga Vanhu
Kwete chete iyo remara inogona kubatsirwa nemacheya emagetsi. Inogonawo kushandiswa nevanhu vanorwara vane nguva yakaoma nekufamba, avo vanopora mushure mekuvhiyiwa kukuru kana vanhu vanotambura nezvinetso zvemwoyo.
mawiricheya anouya mumarudzi akasiyana siyana. Kune mawiricheya emagetsi evana nevakuru uye iwo maviri akasiyana zvakanyanya.
Nemitaira yakawanda uye maficha anowanikwa pamawiricheya, zvakakosha kuti utore iyo inonyatsoenderana nezvido zvako. Unogona kuwana yakakura sarudzo pazvitoro zvepamhepo.
Inorema, Chiedza, Inotakurika uye Inotakurika
Mazhinji ekugadzira mawiricheya akanyorwa mumadhairekitori ebhizinesi epamhepo. Unogona kuwana wiricheya inorema, yakareruka, inotakurika, inopengeka uye izvo zviri nyore kuisa pamwe chete nekuzviparadzanisa pazvitoro izvi zvepamhepo.
Mota iri muwiricheya yemagetsi inomhanya pamabhatiri uye chigaro chinowanzodzorwa nechimuti chemufaro kana dzimwe nguva nechirebvu, saga kana chidzori chemaoko. Iyo joystick inogonawo kushandiswa tilt wiricheya pamwe chete nekukwira kwegumbo nechigaro. Unogona gadzirisa vatungamiriri kuti vakwanise zvaunoda.
Kunyangwe quadriplegics inogona kuve nemawiricheya akagadziridzwa kuti aenderane nezvavanoda. Sezvo wiricheya yemagetsi yemazuva ano yakagadzirwa naGeorge Klein, akaenderera mberi achive ane mukurumbira mumunda wesainzi uye tekinoroji.